Warshadda tubada saliida badda, Soosaarayaasha - Soosaarayaasha tubbada saliida ee Shiinaha
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuulada Gudaha: Danyar, saliid iyo shidaal adkaysi u leh Sumad La'aan iyo ExtrudedAcrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee linigga weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Dabool: Madmadow Sintetiko Rubber saliid u adkaysta. Hal Bakhtiga Ah Iyo Laba Bakhtiyaa Sabayn Materia ...
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuubada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal adkaysi u leh bilaa nadiif ah iyo 'Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded' (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee dahaadhka weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Daboolka: Saliida Madoow ee Rubber Smooth iyo shidaal u adkaysta. Bakhtiga Kali Ah Iyo Laba Bakhtiga Dul sababa ...
Taangiga Tareenku Sabeeyo
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuubada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal adkaysi u leh bilaa nadiif ah iyo 'Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded' (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee dahaadhka weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Daboolka: Saliida Madoow ee Rubber Smooth iyo shidaal u adkaysta. Bakhtiga Keliga ah Iyo Bakhtiga Laba Bakhtiyaa ...
Tail Daboolo tubbo
Yaraynta Tuulada sabaynaysa
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuubada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal adkaysi u leh bilaa nadiif ah iyo 'Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded' (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee linigga weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Daboolka: Saliida Madoow ee Rubber Smooth iyo shidaal u adkaysta. Waxyaabaha sabayn: Xumbo unug oo xidhan. Ou ...
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuubada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal adkaysi u leh Sumad La'aan iyo Xadgudub Acrylontrile Butadiene Rubber (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee dahaadhka weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Bakhtiga Kali ah iyo Bakhtiga Dukaanka Dibedda ah: Madoow jilicsan, Rubber synthetic oo u adkaysata Abrasion, ...
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuubada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal adkaysi u leh bilaa nadiif ah iyo 'Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded' (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee linigga weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Bakhtiga Kali ah iyo Bakhtiga Dukaanka Dibadda: Madoow madoow, Rubbaalka Sintetka u adkaysata xoqida, O ...
Tubbada Gujisyada leh Quful-xoojinta Hal Dhammaad ah
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuulada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal u adkaysta Nadiif aan xaddidnayn iyo Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee linigga weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Bakhtiga Kali ah iyo Bakhtiga Dukaanka Dibedda ah: Madoow jilicsan, Rubber synthetic oo u adkaysata Abrasion, ...
Hal Dhammaad Oo La Sii Xoojiyay Tuubo Markab Oo Gujis Ah Oo Koolar Leh
Dhismaha & Waxyaabaha Laydhka Weyn / Tuulada Gudaha: Si siman, saliid iyo shidaal u adkaysta Nadiif aan xaddidnayn iyo Acrylontrile-Butadiene-Rubber Extruded (NBR); Dahaarka Amniga: dhismo gaar ah oo looga hortagayo cilladaha ama waxyeelada ay keento jeexitaan ama shilalka dusha sare ee linigga weyn; Dib-u-xoojinta: Duufaanno badan oo xadhig silig ah oo silsiladaysan. Mid ka mid ah siligga siligga ah ee birta ah ee jirka lagu xidho. Bakhtiga Kali ah Iyo Laba Bakhtiga Dusha Ka Dhig: Mad madow oo jilicsan, Rubber synthetic oo u adkeysanaya Abras ...
50m Dock Oil tubbo
Dock / Xamuul tuubada Codsiga tuubada saliida Dock waxaa loogu talagalay nolosha ugu badan ee wax soo saarka batroolka iyo wareejinta shidaalka la sifeeyay ilaa 300 cadaadiska adeega PSI. Naqshadeynta tuubada dekedda ayaa faa'iido leh meesha cadaadis shaqo oo sarreeya ama darbi culus oo loogu xoqdo la doonayo. Tuubbooyinka Dock-ka ayaa ah nuugid shaqo culus iyo tuubbooyin dheellitiran oo loogu talagalay in lagu wareejiyo inta u dhexeysa bajaajleyda, taangiyada kaydka iyo maraakiibta badda. Tuubbooyinkaani waxay ku daraan tuubo si gaar ah loo sameeyay si looga hortago warbaahinta ilaa 50-100% udgoon udgoon ...
11.8m Dock Oil tubbo
Dock / Xamuul tubbo saliid Dock wareejinta tubbada Dhismaha: Tube: Black, siman, Nitrile caag synthetic, ku habboon ilaa 50% content udgoon. Xoojinta: Isku dhufo xarigga taayirrada culus ee culus oo lagu taageerayo silig helix ah, fiilooyin anti-ma guurto ah. Dabool: Madow, dhammayn la duudduubay, caag la farsameeyay oo loogu talagalay abrasion sare, ozone & iska caabbinta cimilada. Heerkul Fiican: -40 ℃ ilaa + 100 ℃ (180 ℉) Cunsurrada nabadgelyada: 5: 1 Tuubada Wareejinta Saliida Dock Dabeecad: C / W oo la dhisay oo leh hal dhinac oo go'an iyo hal dhinac oo swi ah ...